आजदेखि २ रुपैयाँको नयाँ सिक्का बजारमा, के-के छन् विशेषता ? - Naya Sanchar
आजदेखि २ रुपैयाँको नयाँ सिक्का बजारमा, के-के छन् विशेषता ?
३० पुष २०७८, शुक्रबार ०९:५२
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सूचना अनुसार २ रुपैयाँको सिक्का आजदेखि प्रचलनमा ल्याउन लागेको हो । आजदेखि बजारमा २ रुपैयाँ दरको नयाँ सिक्का प्रचलनमा आउने भएको छ ।
Tags: #नयाँ सिक्का